Kuuriyada Koonfureed oo ka joojisay cabitaanka bunka dhamaan dugsiyada ku yaala dalkaasi – Somali Integration Tv
Kuuriyada Koonfureed oo ka joojisay cabitaanka bunka dhamaan dugsiyada ku yaala dalkaasi
Waxaa qoray Abdiaziz Hassan	 La dabacay Maanta Sep 2, 2018 0
(SITV-MUQDISHO)- Kuuriyada Koonfureed ayaa go’aansatay in dhammaan ay ka joojiso ardaydeeda iyo macallimiintooda cabitaanka ay ku jirto maadada loo yaqaano (caffeine) ka inta lagu guda jiro xilliga waxbarashada ama lagu sugan yahay dugsiyada,laga bilaabo September 14.
Go’aankan marka loo eego waxa waxa laga saari doonaa bunka meelaha cuntada ee dugsiga iyo in la baabi’in doono mashiinada ku baahsan dugsiga,kaasoo ku biiri doonta cabitaanada tamarta oo laga joojiyay dugsiyada dalkan tan iyo 2013, sida laga soo xigtay wargeyska ( Les Echos) ee kasoo baxa France.
Wasaaradda bad-qabka iyo Cuntada ayaa rajeyneysa in go’aankaan uu ka gargaari doono dhallinyarada inay la qabsadaan caadooyinka cunto caafimaad leh oo aan waxyeello u geysanin caafimaadkooda marka ay u guclaynayaan si ay ugu gudbaan imtixaannada.
Shabakadda wararka ee CNN ayaa sheegtay in daraasad lagu sameeyay in ka badan 5,400 ardayda dugsiyada sare ee Kuuriyada Koonfureed sanadkii 2012-kii ay muujisay in 19% oo ka mid ah ay cabbeen 1 koob ama ka badan oo bun maalin kasta,halka in ka badan kala badh kamid ah cabaan nooc.
Wasaaradda ayaa ku sheegtay xukunkeega in cabista xad-dhaaf ka ah ay keeni karto matag,khalkhal garaacida wadnaha ah iyo hurdo la’aan.
Waxa la ogyahay in Kuuriyada Koonfureed ay tahay dalka 7-aad ee ugu wayn ee dibada soo dajiyay bunka,waxana sannaddii 2017-kii ay soo dajisay qiime lagu qiyaasay ( $ 700 million) malyuun oo dollar, sida uu sheegay ururka ganacsiga ee (Korean International Association),.
Waxa sidaa daraadeed haddii loo qaybiyo muwaadiniinta cabitaanka bunka ee sanadkii la soo dhaafay,ay noqonaysaa in mid kasta oo iyaga kamid ah uu cabbay isku celcelis ahaan 512 koobab ah oo bun ah, oo ah 1 ama 2 koobab Maalin walba, taasoo ka dhigaysa tahay macaamiisha ugu weyn ee bunka ee Asia.
Mareykanka oo Pakistan ka joojin doono tageero badan oo uu siin jiray
Danjire Michael Keating oo hoygiisa ku booqday Xasan Sheekh Maxamuud
Hoggaamiyeyaal Ordugan uu kujiro oo kulan xasaasi ah yeelanaya
Daawo: Telefishinka Aljazeera oo muuqaal murugo leh ka diyaariyay Soomaalida ku nool…
Qorshaha Biritin ay kaga baxeyso Midowga Yurub oo laga hor yimid